ShweMinThar: ၀န်ထမ်းမြဲစေတဲ့အချက်တွေ နဲ့ မန်နေဂျာတွေကြောင့် ၀န်ထမ်းတွေ အလုပ်ထွက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းများ
၀န်ထမ်းမြဲစေတဲ့အချက်တွေ နဲ့ မန်နေဂျာတွေကြောင့် ၀န်ထမ်းတွေ အလုပ်ထွက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းများ
• သင့်တင့်မျှတတဲ့ လစာနဲ့ခံစားခွင့်များရှိခြင်း
• အရည်အသွေးပြည့်ဝကောင်းမွန်သူတွေနဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်ရခြင်း
• စီမံခန့်ခွဲသူတွေရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အထောက်အပံ့တွေရှိခြင်း
• အသိအမှတ်ပြု၊ တန်ဖိုးထား၊ လေးစားခံရခြင်း
• လုပ်ငန်းအနေနဲ့ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားဖွယ်အခြေအနေရှိခြင်း
• ကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိခြင်း
• အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေပြောင်းလဲတဲ့ အလုပ်တာဝန်ခွဲဝေမှုရှိခြင်း
• အသိပညာ၊ ကျွမ်းကျင်တိုးတက်မှုရှိခြင်း
ဒီအချက်တွေက ၀န်ထမ်းတွေကို မြဲအောင်ထိန်းတဲ့နေရာမှာ အသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Ref; Career Systems Internaitonal, 2005
မန်နေဂျာတွေကြောင့် ၀န်ထမ်းတွေ အလုပ်ထွက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းများ
စာရေးသူရေးတဲ့ စာတွေမှာအမြဲတမ်းပြောခဲ့သလို ၀န်ထမ်းတွေအလုပ်ကို စွန့်ခွာသွားရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်း (၂) ခုရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက ဈေးကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေက လက်ရှိဝန်ထမ်းတွေကို ရာထူး၊ လစာ၊ ခံစားခွင့်တွေဖြစ်တဲ့ Pull Factors တွေကို မိမိလုပ်ငန်းထက်ပိုပေးလို့ထွက်သွားတာဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုကတော့ လက်ရှိ ၀န်ထမ်းကို ထွက်သွားအောင် လုပ်ငန်းဘက်က တွန်းထုတ်သလိုဖြစ်တဲ့ Push Factors တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြား အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိနိုင်ပေမဲ့ (ဥပမာ၊ အစိုးရအလုပ် လုပ်သွားလို့) အဓိက ကတော့ ဒီ (၂) ချက်ကြောင့်ပါပဲ။
တကယ်တော့ ဈေးကွက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေက ရာထူး၊ လစာ၊ ခံစားခွင့်တွေပိုပေးလို့ ၀န်ထမ်းတွေ အလုပ်က ထွက်သွားတာထက်စာရင် ၀န်ထမ်းကောင်းတွေကို မထွက်ထွက်အောင် တွန်းထုတ်သလိုဖြစ်စေတဲ့အချက်တွေဟာ လုပ်ငန်းအတွက် နစ်နာစေပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေကို တွန်းထုတ်သလိုဖြစ်စေတဲ့ စီမံခန့်ခွဲသူတွေရဲ့ အမှားတချို့ကို ဖေါ်ပြလိုပါတယ်။
Fail to get to know employees as people. ပထမဆုံးအချက်ကတော့ ၀န်ထမ်းတွေဟာ လူတွေထဲက လူဆိုတာကို မေ့နေတတ်တာပါပဲ။ လက်အောက်ငယ်သားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ဆက်ဆံရေး ဖန်တီးထားတာဟာ စီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာ အရေးကြီး ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ ကိစ္စဟာ ကိုယ့်ကိစ္စလို့ယူဆတဲ့ စီမံခန့်ခွဲသူတွေရှိသလို၊ ၀န်ထမ်းတွေအမှားလုပ် တာ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စီမံခန့်ခွဲသူတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ အကြောင်းကိစ္စတွေဟာ မိမိနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ ယူဆသင့်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းက လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ မဆိုင်ပေမဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလုပ်ထဲမှာ စိတ်ပါ ၀င်စားမှုမရှိဘဲ အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဟာ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ဆိုင်လာပါပြီ။ တချို့တွေပြောကြပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ရောက်လာရင် Personal နဲ့ အလုပ်နဲ့ ခွဲထားနိုင်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ ဒီအချက်ကလည်းမှန်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေကို စီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာ Personal မပါသင့်တဲ့အကြောင်းဆိုလိုတယ်လို့ စာရေးသူ ယူဆမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေက လုပ်ငန်းခွင်ကို သက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲသူတွေအနေနဲ့ ဒီလိုအခြေအနေတွေကို သိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်သလို ၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် နည်းပေးလမ်းပြပေးဖို့၊ အကြံပေးဆွေးနွေးနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Fail to provide clear direction. နောက်ထပ်အမှားတစ်ခုကတော့ ရှင်းလင်း ပြတ်သားတဲ့ လမ်းညွှန်မှုတွေမပေးနိုင်တာပါပဲ။ မန်နေဂျာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေဆီကဘယ်လိုစွမ်းဆောင်ရည်တွေရရှိဖို့အတွက် မျှော်မှန်းထား တယ်ဆိုတာ၊ ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ၀န်ထမ်းတွေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိနေအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စာရေးသူတို့ စီမံခန့်ခွဲသူတွေအနေနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေအပေါ်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေပေးနိုင်မှ ၀န်ထမ်းတွေဟာ ဒီညွှန်ကြားချက်တွေအပေါ် အလေးထား ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Fail to trust. ဒီကိစ္စအရေးကြီးပါတယ်။ ယုံကြည်ဖို့ကိစ္စ။ စီမံခန့်ခွဲသူအများစု ဟာ ၀န်ထမ်းတွေအပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုမရှိကြဘူး။ ၀န်ထမ်းတွေမှားလုပ်မိမှာ စိုးလို့။ ၀န်ထမ်းတွေလုပ်လို့ လိုချင်တဲ့ရလဒ်တွေထွက်မလာမှာစိုးလို့ ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ အရာရာကို ၀င်ပါပြီး ပါလေရာငပိချက် စီမံခန့်ခွဲသူ Micro Manager ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အထက်လူကြီး ယုံကြည်လေးစားတာကို လိုချင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာဖတ်သူတို့ တစ်ခု သတိထားရမှာကတော့ ၀န်ထမ်းတိုင်းကတော့ ယုံကြည်ရလောက်တဲ့ စိတ်ချရမှု မရှိတတ်ပါဘူး။
Fail to listen to and help employees feel that their opinions are valued. ၀န်ထမ်းတွေဆီကအသံ နားထောင်တာအားနည်းတတ်ပြီး ၀န်ထမ်းတွေ ရဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုလည်းတန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့အမှားပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကောင်းကောင်းနားထောင်တတ်တဲ့ အရည်အချင်းဟာ စီမံခန့်ခွဲမှု အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နားထောင်တတ်တဲ့ စွမ်းရည်ဟာ မိမိအနေနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေအပေါ်မှာ တန်ဖိုးထားကြောင်း ၀န်ထမ်းတွေနားလည်သွားစေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအမှားကိုပဲ စီမံခန့်ခွဲသူ အများစု ထပ်ကာထပ်ကာ မှားနေကြတုန်းပါပဲ။
Make decisions and then ask people for their input. ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ ရာထူးအတိုင်းအတာအလိုက် ခွဲဝေပေးလေ့ မရှိဘဲ အရာအားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲသူကသာ ဆုံးဖြတ်နေတတ်ကြပါတယ်။ အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ ၀န်ထမ်းတချို့ဟာ သူတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရလို ကြပါတယ်။
Fail to react to problems and issues that will soon fester if ignored.
၀န်ထမ်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းအခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းမပေးဘဲ လျစ်လျူရှုနေတတ်တဲ့အမှားကို စီမံခန့်ခွဲသူတွေ ပြုလုပ်နေ ကြတုန်းပါပဲ။ ၀န်ထမ်းတွေဟာ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆောင်ရွက်နေရင်း လုပ်ငန်း အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့လာရင်၊ စီမံကိန်းအသစ်တွေကို စတင် အကောင်အထည် ဖေါ်တဲ့အခါမှာ အကြံဥာဏ်အကူအညီတွေ လိုအပ်လာရင် စီမံခန့်ခွဲသူတွေရဲ့ အကူညီအထောက်အပံ့ပေးတာကို လိုချင်တောင့်တကြ ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ စီမံခန့်ခွဲသူတွေဟာ အဥာဏ်ပေးနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲသူတွေဟာ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာ မှတ်သားနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Trying to be friends with employees who report to you. ၀န်ထမ်းတွေ နဲ့ သူငယ်ချင်းပေါင်း ပေါင်းဖို့ကြိုးစားတာဟာလည်း ကောင်းမလိုနဲ့ မကောင်းတဲ့ အချက်တွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ စီမံခန့်ခွဲသူအကြားမှာ နွေးထွေးပွင့်လင်း သာယာတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးရှိတာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းပေါင်း ပေါင်းရင်တော့ အခက်အခဲတချို့ရှိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အလုပ်နဲ့ ရင်းနီးမှုဟာ မရောထွေးသင့်ပါဘူး။ ရင်းနီးမှုနဲ့ အလုပ် ရောလာရင် ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်ရမယ့် အကြောင်းအရာတွေမှာ အားနာ ရတာတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။
Fail to communicate effectively and withhold important information. လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အရေးကြီးအကြောင်းအရာတွေကို ၀န်ထမ်းတွေ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း သိရှိနားလည်အောင် မလုပ်နိုင်တဲ့အားနည်းချက်တချို့ဟာ စီမံခန့်ခွဲသူတွေမှာ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာအရေးကြီးပါတယ်။ အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ လိုအပ်လာတဲ့အခါမှာလည်း ၀န်ထမ်းတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ရင် ၀န်ထမ်းတွေဟာ အပြောင်းအလဲကို ခုခံတတ်ကြပါတယ်။
Not treating all employees equally. ၀န်ထမ်းတွေအားလုံးကို သာတူညီမျှ မဆက်ဆံတဲ့အမှားဟာ အတော်ဆိုးရွားတဲ့ ရလဒ်တစ်ခု ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတာ လူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက် ဘက်လိုက်မှုတွေကတော့ ရှိနေမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ၀န်ထမ်းတွေဟာ သိသာထင်ရှားလောက်တဲ့ ဘက်လိုက် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ မျက်နှာသာပေးမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့လာရင် စိတ်ဓါတ်ရေးရာ ပျက်ပြားနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်စိတ်ကျေနပ်မှုတွေပျောက်ဆုံးတဲ့အထိ ဦးတည်နိုင် ပါတယ်။
Throw employees under the bus. ၀န်ထမ်းတွေ အလုပ်လုပ်ရင်း အမှားအယွင်းတွေရှိလာရင် စီမံခန့်ခွဲသူတွေဟာ တာဝန်မယူ တတ်ဘဲ ၀န်ထမ်းတွေကိုသာ အပြစ်တင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ တကယ်တော့ မိမိ လက်အောက်ငယ်သားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ မိမိနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့ တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်ထားဟာ လုပ်ငန်းခွင် စီမံခန့်ခွဲတဲ့ နေရာမှာအရေးကြီးပါတယ်။
စာရေးသူဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ စီမံခန့်ခွဲသူတွေရဲ့အမှားတွေဟာ ယနေ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ အများအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နေတတ်ကြတဲ့အမှားအယွင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအမှား တွေကို ဆက်ကာဆက်ကာ ပြုလုပ်မိရင် ၀န်ထမ်းတွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်ကို စွန့်ခွာသွားတဲ့ အခြေအနေအထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေ။
Ref; Top 10 Mistakes Managers Make Managing People by Susan M.Healthfield, Human Resource Management by Gary Dessler, 13th Edition
Credit : ဆရာပိုင်စိုးရဲ့ Page
Posted by Alex Aung at 8:42 AM